Sr. Gen Min Aung Hlaing is losing the war in Kokang ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Criminal Swarn Arr Shins exposed. So Myanmar Gov should be pulled to ICC for Mass Murders and Genocide ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွဲသူ စွမ်းအားရှင်များတွင် မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့အချို့ပါဝင်
ဘာသာရေး လူနည်းစုများအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုအတွက် ကုလ သတိပေး »
Sr. Gen Min Aung Hlaing is losing the war in Kokang ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်
David Law shared Ko Nyo‘s photo.
Comprehensive analysis by Aung Thazin about how Sr. gen MAH is losing the war in Kokang, sustaining heavy losses, how his forces are spread too wide apart in the entire nation, how he is wasting national treasure trying to recoup his military losses that cannot be recouped, trying to save his face.
ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင် ( ဆောင်းပါး)
မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉-၁၀-၁၁-၁၂ ရက်တွေတုံးက သူ့တပ်တွေအထိနာသွားခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ တပ်ရင်း ၃၀ ကျော်ထပ်ဖြည့်သုံးနေပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇-၂၈-မတ် ၁ ရက်နေ့ သုံးရက်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေမှာ တပ်မ ၃၃ လက်အောက်ခံ ခမရ ၁၁၁ နဲ့ ခမရ ၁၂၀ က အရာရှိ ၂ ယောက်အပါဝင် ၆၈ ယောက်ကျခဲ့တယ်။ မတ်လထဲမှာဘဲ ခမရ ၁၁၉ ကို လေတပ်ကမှားဗုံးကြဲလို့ ၈ ယောက်လောက်ကျသွားသေးတယ်။
Also there is mention of widespread drug production by the sr. Gen. And his subordinates , corruption.. Wastage… How the military units are very much undermanned, under strength.
and how all the heavy weapons systems showed off during Independence Day are useless in the rugged Kokang terrain.
The author suggests that the Sr. gen. should do better to negotiateafederal political settlement with all ethnic parties and achieve peace instead of wasting his soldiers’ lives inasenseless ongoing war, trying to get elected president using the blood of his men.
An excellent article with very eye opening facts.
ဗမာစစ်တပ်တွေ စုတ်ပြတ်သတ်အောင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အခဲမကြေနိုင်ဘဲ ကိုးကန့်တပ်တွေကို အပြုတ်တိုက်မယ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမယ် ကြွေးကြော်ပြီး ခြေလျင်တပ်မ တစ်မ ထပ်ပေးမယ်၊ လေကြောင်းပစ်ကူ၊ အမြောက်ပစ်ကူ လိုသလောက်ပေးမယ်လို့ တပ်မမှူး ကစထမှူးတွေကို ကတိပေးပြီး ကတိကိုဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေရရှာတယ်။
လောလောဆယ် ကချင်ပြည်မှာ တပ်မ ၉၉ နဲ့ တပ်မ ၁၀၁ ကိုထည့်ထားပြီး တပ်မ ၁၀၁ က ၂ ရင်းကို လောက်ကိုင် ပို့ထားရတယ်။ ဖားကန့်-ကာမိုင်းဘက်မှာတော့ ဖယ်ခုံက စကခ ၇ ကိုထည့်ထားတယ်။ တပ်မ ၇၇ နဲ့ တပ်မ ၈၈ က တော့ ပလောင်အဖွဲ့ TNLA ကို ဆိုင်ထားတယ်။ ဒီကြားထဲက တပ်မ ၈၈ နှစ်ရင်းကို လောက်ကိုင်ဘက် စစ်ကူသွား ခိုင်းပြီး တပ်မ ၉၉ ကတချို့ကိုလဲ ကွတ်ခိုင်လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုးကန့်အနောက်ဘက် သံလွင်ကူးတို့ဆိပ်တွေ ပိတ်ဆို့ရေး လုပ်ခိုင်းထားရတယ်။
တပ်မ ၃၃ မှာ ၆ ရင်းဘဲ ကိုးကန့်တပ်တွေကို တိုက်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနောက်မြောက်တိုင်း (နမခ) လက်အောက်ခံ ၂ ရင်းကို တပ်မ ၃၃ အောက်ထည့်ထားပေးလို့ ၈ ရင်းဖြစ်နေတယ်။ တောင်ဘက် ဝ နယ်စပ်ကို ထိန်းထားတဲ့ တပ်မ ၁၁ ဆီက ၃ ရင်းကို လောက်ကိုင်ဘက်ပို့ပြီး အားဖြည့်ပေးရတယ်။ သိန္နီ စကခ ၁၆ က ၆ ရင်းပို့ခဲ့တာ ခမရ ၅၂၂ ကတော့ တရင်းလုံးပြုတ်သွားလို့ ၅ ရင်းဘဲကျန်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်မဲ စကခ ၁ က ၃ ရင်း ထပ်ပို့ရတယ်။ မူလရှိနေတဲ့ ဒကစ(လောက်ကိုင်) လက်အောက်ခံ ၅ ရင်းမှာ ခလရ ၁၂၅ နဲ့ ၁၂၉ ရင်းလိုက်ပြုတ်သွားလို့ ၃ ရင်းဘဲကျန်တဲ့အတွက် အရှေ့မြောက်တိုင်း (ရမခ) တပ် ၂ ရင်း ဖြည့်ပေးထားရတယ်။
လက်ကျန်တပ်မတွေထဲမှာ တပ်မ ၅၅ က ကရင်နီပြည်မှာ ထိန်းထားရတယ်။ နောက်တန်းစောင့် ၂ ရင်းကျန်တဲ့ထဲက ခမရ ၁၈ ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းက တပ်အသစ် ၂ ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုးကန့်ဒေသကို ပို့ခိုင်းလိုက်ရတယ်။ KNU နဲ့ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေတယ်ပြောပြော ကရင်ပြည်၊ မွန်ပြည်တွေမှာ အခြေစိုက်တဲ့ တပ်မ ၂၂ နဲ့ တပ်မ ၄၄ တို့ကိုလဲ အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကနေ အဝေးကို မသွားခိုင်းရဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်က BGF တွေနဲ့ DKBA KNU တို့က ကိုးကန့်မှာ မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကသွားတိုက်မယ်လို့ စစ်လော်ဘီတွေ သတင်းလွှင့်တော့ တပ်မ ၂၂ နဲ့ ၄၄ အခြေ အနေကိုသိထားသူတွေအဖို့ ရယ်စရာဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်မှာ တနှစ်ကျော် ရှေ့တန်းတာဝန်ထမ်းခဲ့ရပြီး နောက်တန်းပြန်ရောက်တာ ၁၅ ရက်ကျော်ကျော်ဘဲ ရှိသေးတဲ့ တပ်မ ၆၆ တခုလုံးကို ကိုးကန့်နယ်ကိုပို့ပြီး တိုက်ပွဲပြန်ဝင်ခိုင်းလာရတယ်။ ၇ ရင်းကို ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ လောက်ကိုင်ပို့ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ဗမာပြည်စစ်သမိုင်းမှာ လေကြောင်းချီစစ်ကူပို့မှု အများဆုံးအရေအတွက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကွတ်ခိုင်ကနေသံလွင်ကို ကုန်းလမ်းသွားခိုင်းတဲ့ ၃ ရင်းကတော့ သံလွင်အနောက်ဖက်မှာတင် ဖြတ်အတိုက်ခံရလို့ ၃ ယောက်သေ၊ ၄ ယောက်ဒဏ်ရာရသေးတယ်။
တပ်မ ၆၆ ဟာ ဖားကန့်မှာ စကခ ၇ နဲ့လဲပြီး နောက်တန်းပြန်ဖို့ကို တခါတည်းတန်းမပြန်ရဘဲ မေမြို့မှာ လက်နက်ခဲ ယမ်းတွေ ထပ်ဖြည့်ပြီး လောက်ကိုင်လွှတ်ဖို့ အသင့်စုဖွဲ့နေခဲ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးထွက်တာ တနှစ် ကျော်ခဲ့ပြီး အထိလည်းနာခဲ့ပြီး အခုမှနောက်တန်းပြန်နားဖို့ ဆင်းလာတဲ့တပ်ကို နောက်တန်းပေးမပြန်ဘဲ လောက်ကိုင် တန်းလွှတ်လိုက်ရင် ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်ကျမှ အင်းမ ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ နောက်တန်းမှာ တလပြည့်အောင် မနေရဘဲ မတ်လ ၁၁ ရက်မှာ လောက်ကိုင်ကို တက်လာရတာကိုကြည့်ရင် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ရဲဘော်တွေကို ချနင်းဖို့စဉ်းစားတာ အင်မတန်သိသာနေတယ်။
ချင်းပြည်နယ်အစပ်က ကလေးအခြေစိုက် စကခ ၁၀ ကိုလဲ ကိုးကန့်ကိုပို့ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်။ စုစုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ တပ်ရင်း ၅၀ ကျော်သွားနိုင်တယ်။ ဒါဟာ ဟိုတချိန်က ဗမာပြည်မှာ အကြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေးတွေ ဖြစ်တဲ့ မင်းရန်အောင်ထိုးစစ်၊ စီစီဝန်စစ်ဆင်ရေး၊ မယ်သဝေါစစ်ဆင်ရေး၊ မာနယ်ပလောစစ်ဆင်ရေးတို့ထက် အများကြီးသာ သွားပြီဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု တပ်ရင်းတရင်းဆိုတာကလဲ လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ဘဲရှိလို့ နံပတ်အရသာများပြီး တကယ့် အင်အားအရ သနားစရာပါ။ ဟိုးအရင် ၇၀ ခုနှစ် ၈၀ ခုနှစ်တွေတုံးကဆိုရင် တပ်မ ၇၇ တပ်မ ၈၈ တပ်မ ၉၉ တို့ တပ်မတစ်မထဲမှာဘဲ ရှေ့တန်းထွက် တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား ၅၀၀၀ လောက် ရှိခဲ့ကြတယ်။ အခု အင်အား ၅၀၀၀ ကတော့ ကွပ်ကဲမှုမျိုးစုံ ခေါင်းမျိုးစုံနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုးကန့်ဒေသမှာ တရားဝင်အားဖြင့် အမြင့်ဆုံးတပ်မှူးဖြစ်နေတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး-ဒကစမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောမြင့်ဦး (ငယ်နာမည် ပေါက်ကျိုင်း) ဟာ ကိုးကန့်ထဲစစ်ဆင်ရေးဝင်နေတဲ့ တပ်မ ၆၆ နဲ့ စကခ ၁၆ တပ်မမှူးတွေ ထက် ဂျူနီယာကျနေတော့ ဘယ်လိုကွပ်ကဲနေလဲ မပြောတတ်။ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တိုင်းဆွဲရတဲ့ စီမံချက်လေးမျိုး (ဌာနချုပ် လုံခြုံရေး၊ နယ်မြေလုံခြုံရေး၊ နယ်မြေစိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေစည်းရုံးရေး) နဲ့ သာမန်အချိန်၊ အရေးကြီးအချိန်၊ အရေးပေါ် အချိန်ဆိုင်ရာအစီအမံတွေဟာ ကိုးကန့်ဒေသအတွက် ဘာမှအလုပ်မဖြစ်တာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ပွင့်ကျသွားခဲ့လို့ အရေးယူခံရမှာ သေချာနေတဲ့ ဒကစမှူးဟာ ရှေ့ဆက်လက်ပြီး ဘယ်လို စစ်နိုင်အောင် ကွပ်ကဲနိုင်မှာလဲ။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ပလောင်တပ်နဲ့ ကချင်တပ်တွေကို စစ်ဆင်ရေးဝင်နေရတဲ့ တပ်မ ၇၇၊ တပ်မ ၈၈၊ တပ်မ ၁၁ တို့ဟာလဲ ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးကာလ တနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်လို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းအတိုင်းဆိုရင် တပ်လဲပေးရ တော့မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လဲစရာအရံတပ်မ မရှိ။ နောက်တန်းမပြန်ရဘဲ ဒါလောက်အကြာကြီး ရှေ့တန်းမှာ နေရတာ ကြောင့် စစ်သားတွေမှာ နာကျည်းစိတ်တွေမြင့်ပြီး တပ်ပြေးမှု၊ လုယက်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှုတွေ ပိုပေါက်ကွဲလာ တယ်။ ဒါကြောင့် ဗမာစစ်တပ်အဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်အဖို့ အကျပ်အတည်းကြီးနေပြီဖြစ်တယ်။ အကယ်၍သာ ၈ လေးလုံးတုံးကလို မြို့တွေပေါ်မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်လာရင် ပတ်တုတ်မရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
နောက်တခါ တိုက်ပွဲအနေအထားကြည့်ရင် ကိုးကန့်တပ်တွေဟာ ဗကပ လက်ထွက်တွေပီပီ ဘဇူကာ လို့ခေါ်တဲ့ RPG တွေကို တပ်စိတ်လက်နက်အဖြစ် ဖောဖောသီသီသုံးနေတော့ ဗမာစစ်တပ်မှာ ထိခိုက်ကျဆုံးကများနေတယ်။ လွန်ရော ကျွံရော အင်အား ၁၀၀ လောက်ဘဲရှိတဲ့ တပ်ရင်းတရင်းမှာ ကျဆုံးဒဏ်ရာ ၅၀ လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဒီတပ်ရင်းဟာ ဘာမှဆက်လုပ်လို့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
ကိုးကန့်စစ်ပွဲ ပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်ကနေ မတ်လ ၉ ရက်အထိ တစ်လစာရင်းချုပ်လိုက်ရင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်က တပ်ရင်းမှူး ၃ ယောက်အပါ အရာရှိ ၃၂ ယောက်ကျဆုံးပြီး တပ်ရင်းမှူး/ဒုရင်းမှူး ၉ ယောက်အပါ အရာရှိ ၅၇ ယောက်ကျဆုံးခဲ့တယ်။ အခြားအဆင့်တွေပါ ပေါင်းလိုက်ရင် စုစုပေါင်းကျဆုံးဒဏ်ရာ ၇၀၀ နီးပါးရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေဘက်မှာတော့ ကျဆုံးတာ ၂၀ နီးပါး၊ ဒဏ်ရာက ၄၀ ကျော်-၅၀ လောက် ဘဲရှိတာတွေ့ရတယ်။ မယုံနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်က အဲသလိုဘဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ဒါလောက်အထိ ရှုံးမဲမဲနေတာ ဖြစ်တယ်။
တပ်တွေထဲမှာလဲ တချို့တပ်တွေက အသေခံတိုက်နေချိန်မှာ တချို့တပ်တွေက ရန်သူဝေးတဲ့ရွာတွေထဲ ပစ္စည်းတွေ ဝင်လုနေကြတာလဲရှိတယ်။ တပ်ကို လူမျိုးရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်ပြီး ခိုင်းစားနေတယ်။
တိုင်းရင်းသားဘက်မှာတော့ ပလောင်တပ်နဲ့ ရခိုင်တပ်က အကျအဆုံးမရှိသေးဘဲ ဒဏ်ရာရတာဘဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုးကန့်ဒေသထဲက ကိုးကန့်ရွာသားတွေနဲ့ ပလောင်ရွာသားတွေက တော်လှန်ရေးထဲ အစုပြုံလိုက်ဝင်လာ ကြလို့ အင်အားတွေ ရာဂဏန်းတိုးလာခဲ့တယ်။
စစ်သည်အင်အားဖြုန်းတီးမှုအပြင် ဘဏ္ဍာရေးဘက်ကကြည့်ရင်လဲ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်ငွေတွေကို အချည်းနှီး ဖြုန်းတီးနေတာ ဖြစ်နေတယ်။ ၁၀၅မမ အမြောက်နဲ့ ၁၂၀မမ မော်တာကို တရက် အလုံး ၂၀၀ ကျော်အထိပစ်နေတော့ ငွေဘယ်လောက်ကုန်မလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမြောက်လက်နက်ကြီးကျည်တွေ၊ လေယာဉ် ရဟတ်ယာဉ်တွေ ကပစ်တဲ့ ရော့ကက်နဲ့ဗုံးတွေဟာ တန်ဖိုးကြီးရုံတင်မက လေယာဉ်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေပျံဖို့ လေယာဉ်ဆီကလဲ ရွှေနဲ့စက် ဝယ်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်မှာ လေယာဉ် ရဟတ်ယာဉ်တွေ ဖောဖောသီသီ ကာလရှည်သုံးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ နောက်ဆုံးမှာ ဒေါ်လာကို ရွှေနဲ့ကျောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့စနစ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီး ၁၉၇၃-၇၄ ကမ္ဘာ့ရေနံ ဈေးမြှင့်ချိန်မှာ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်သွားခဲ့ရတယ်။ လက်ရှိကိုးကန့်စစ်ပွဲဟာ ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာ လေ ကြောင်းပစ်ကူ အသုံးဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်။
တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြပွဲ၊ မိတ္ထီလာ စစ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကျောက်ဆည် တင့်စွမ်းရည်ပြပွဲ တို့မှာ ထုတ်ကြွားခဲ့တဲ့ တင့်ကား တွေ၊ သံချပ်ကားတွေကလဲ ကိုးကန့် ပလောင် ကချင်တို့နဲ့ တောတွင်းစစ်ပွဲ တောင်ပေါ်စစ်ပွဲတွေမှာ သုံးစားမရဖြစ်နေ တယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံဆီက အစီးတထောင်ထုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့ BTR-3U စစ်သည်တင်သံချပ်ကားတွေကို လမ်း လုံခြုံရေးစိတ်မချရတဲ့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဗမာစစ်သားတွေအသက်ဘေးလုံခြုံမှုအတွက် လမ်းကြောသုံးဖို့ တိုက်တွန်းနေ ကြပေမဲ့ ဆီစားနှုန်းမြင့်တဲ့ အဲဒီယာဉ်တွေအတွက် အထူးလောင်စာဆီ စုပုံထားတာလည်းမရှိ၊ သံချပ်ကားတွေရဲ့ဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့တံတားတွေလည်းမရှိတော့ သုံးမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ အညိုရောင်ဒေသတွေမှာ လောင်စာဆီ အများကြီးစုပုံရင်လည်း ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတာဖြစ်မှာမို့လို့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့ တင့်ကား သံချပ်ကားတွေ ဟာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ တပ်မဌာနချုပ်တွေတည်ရှိရာ မြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့မလှမ်းမကမ်း ယာဉ်ပေါ်ပါဆီတိုင်ကီဆန့် သလောက်အကွာအဝေး ဒါမှမဟုတ် လောင်စာဆီစုပုံနိုင်တဲ့ အဖြူရောင်နယ်မြေတွေမှာဘဲ လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်တာ ဖြစ်နေတယ်။
ဒီတော့ ဒီလို ဗမာ့တပ်မတော်အတွက် အဓိပ္ပယ်မရှိတဲ့စစ်ပွဲကို မင်းအောင်လှိုင်က ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီး ဇွတ်တိုက်နေတာ လဲ။ နိုင်ငံရေးအရကြည့်ရင် ဖုံကျားရှင်းဟာ ၈၈ အရေးအခင်းအပြီး စစ်အုပ်စုအတွက် အကျပ်အတည်းကြီးနေချိန်မှာ အသက်ကယ်ပေးခဲ့သူ၊ ၁၉၈၉ ခုကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ငြိမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသူ၊ ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံကို ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ခဲ့သူဖြစ်တာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရပါဘူး။ တဖက်မှာ ဘိန်းလုပ်ငန်း၊ မူးယစ်ဆေးလုပ်ငန်း၊ လက်နက်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ဖုံးကျားရှင်းနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုကိုးကန့်ခေါင်း ဆောင်တွေ၊ တခြားတခြားသော အပစ်ရပ်-ငြိမ်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစိုးရလက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF တွေ နဲ့ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဘယ်သူမှမကင်းတာ ပြည်သူတွေသိကြပါတယ်၊ မင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ သိသလို မင်းအောင်လှိုင်တပ်က တပ်မှူးတွေကိုယ်တိုင် ဝင်ပါနေတာ အများသိကြပါတယ်။
မူဆယ်-လားရှိုးလမ်းမှာ မကြာခင်ကဖမ်းမိတဲ့ ကား ၁၇ စီးတိုက် ဒေါ်လာ ၃ သန်းဖိုး တရားမဝင်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း အမှုကိုဘဲကြည့်ကြည့်၊ ၂၀၁၄ တုံးက ကော့သောင်းပင်လယ်ပြင်နဲ့ မော်လမြိုင်မုပွန်ဆိပ်မှာဖမ်းမိတဲ့ ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ဖိုး အဆင့်မြင့် Ecstasy မူးယစ်ဆေးပြား ၄.၂ သန်းအမှုကိုဘဲကြည့်ကြည့် ဗမာစစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်သြဇာခံလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ပတ်သက်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ဆယ်ခါခိုး တခါမိတဲ့အမှုတွေပါ။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားတဲ့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဆိုတဲ့ စစ်အုပ်စုရုပ်သေး ကိုးကန့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကိုးကန့်နယ်ထဲမှာ တယောက်မှမကျန်တော့ဘဲ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ ဘယ် အစိုးရဘက်သားမှ ကိုးကန့်လူထုဘက်က မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဗမာစစ်တပ်က ရိက္ခာ လစာပေးပြီး ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ ကိုးကန့် BGF တွေလဲ အားလုံးတောခိုပြီး ကိုးကန့်သူပုန်နဲ့ သွားပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ ဗမာ စစ်တပ်တွေကလဲ ကိုးကန့်ဒေသလူထုကို မြို့ရောတောပါ တအားသတ် တအားလု လုပ်နေတော့ လူထုနဲ့ လုံးဝကင်း ကွာသွားပြီ။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ဗမာအစိုးရဟာ ကိုးကန့်ဒေသမှာ နိုင်ငံရေးအရအရှုံးကြီးရှုံးသွားခဲ့ပြီ။
ကိုးကန့်စစ်တပ် ထောင်ဂဏန်းကိုတိုက်တာတောင် ဒါလောက်အကျအဆုံးများနေမှတော့ တကယ်တန်းပြည်ပရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲ။ ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကို နိုင်ငံရေးနည်းအရအဖြေရှာ၊ တိုင်းရင်းသားပြ ဿနာပြေလည်ဖို့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးပြီး စစ်တပ်ကို professional စစ်တပ်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံရေးနယ်ထဲက ထွက် ခွာပြီးလုပ်ဖို့ အထူးအရေးတကြီးလိုအပ်ချိန် ရောက်နေပါပြီ။
ဒါကြောင့် ကိုးကန့်စစ်ပွဲဟာ မင်းအောင်လှိုင် သမတရာထူးအတွက် စစ်သည်တွေရဲ့ အသက်သွေးချွေးတွေ ပေးဆပ်နေ ရတာဘဲဖြစ်တယ်။ မင်းအောင်လှိုင် သိက္ခာဆည်ဖို့အတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုလည်း အလဟသဖြုံးတီးပစ်နေ တာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရ အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲ စစ်ရေးအရ ဘဏ္ဍာရေးအရ ဆုံးရှုံးမှုကြီးလှတဲ့စစ်ပွဲကို ဘာကြောင့် ဆက်ပြီးလုပ်နေသလဲ။ ကိုဂါမဏိရေးခဲ့သလို အာဏာနီတည်ဆောက်နေတာလား။ ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတာကို အမြန်ဆုံးရပ်သင့်ပါပြီ။ စစ်သားတွေရဲ့အသက်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသက်တွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူသားရင်းမြစ်၊ စီးပွားရင်းမြစ်တွေ အဆုံးရှုံးမခံသင့်တော့ပါဘူး။ ဗမာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကြား အမုန်းတရားတွေ၊ လူမျိုးငယ် တွေရဲ့ သံသယစိတ်တွေ ထပ်ပွားလာအောင်၊ ကြီးထွားလာအောင် မလုပ်ပါနဲ့တော့။
This entry was posted on March 15, 2015 at 5:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Sr. Gen Min Aung Hlaing is losing the war in Kokang ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်”
March 15, 2015 at 12:27 pm | Reply
“ပါပါး ! ရှိကြီးခိုး တောင်းပန်တယ်”
ဗမာစစ်အစိုးရကို တရုတ်က ဖုံးဆက်
ပြီး ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းရုံ ရှိသေးတယ်
အရိုးနဲ့ စည်းရိုးထိုးမယ် ဆိုသူတွေ
အာပုံကျော် တံဆိပ်နဲ့ ကောင်တွေ
ငဖား ငယား အညှော်ခံ၊ ဆင့်ဟိုဒင်း
ခွေးမျှော်တွေ၊ မဘသ ဝီလဒူ ငစနှူ တွေ
အားလုံး ရှိသမျှ ဒွါယ အပေါက်တွေ
ရွာက ခရိုနီ တရုတ်တွေကလည်း
တွေ ဖြုတ်နေကြတယ်လို့ ကြားတယ်။
ကွန်မြူနစ် တရုတ်နီကြီးကို ဘယ်လိုမှ
မနိုင်ဘဲ ဟုတ်ကဲ့ “ပါပါး” “အတယ်”
လုပ်နေရတော့ ပြည်တွင်းနေ တရုတ်
တွေဘက် လှည့်လာမှာ ကြိုသိနေတယ်။
လောက်ကိုင်တုန်းက တရုတ်နဲ့ ရုရှား
ဆီက ခေတ်မမီ ရက်လွန် မီးကျိုးမောင်း
ပျက် လက်နက် အစုတ်တွေ ထုတ်ပြပြီး
အွန်လိုင်းပေါ်က စစ်ဘက် ဝါဒဖြန့်ချီ
ရေး စစ်ခွေးတွေ အခုတော့ ဘုန်းကြီး
ကျောင်းက အိမ်သာကျွင်းနား ဝပ်နေ
“ဗမာ့ တပ်မတော်ကို ဘာမှတ်နေလဲ”
“ရေကာတာတွေ ချိုးပြီး တရုတ်ပြည်ကို
ဘာညာ သရကာ ပေါက်တတ်ကရတွေ
လျှာအရိုး မရှိတိုင်း ပြောခဲ့ကြသူတွေ
သောက်သုံး တစက်ကိုမှ မကျတဲ့
စစ်ခွေး အစိုးရကြောင့် ဒင်းတို့ဘက်
ကျောင်းသား ပြည်သူ တိုင်းရင်းသား
လုယက် စော်ကားရဲတဲ့ ဗမာ့ သတ်မတော်
ဆိုတာကြီးကို လူမှန်းသိကထဲက နှမ်းတစေ့
မော်စီတုန်း ခေတ်က စကား ကြားယောင်မိ
တယ်။ ဗမာပြည်လို တိုင်းပြည်ကို တိုက်စရာ
မလိုဘူးတဲ့၊ သန်းထောင်ချီရှိနေတဲ့ တရုတ်
တွေ တပြိုင်တည်း သေးပေါက်လိုက်ရင်